Ise kachasị mma maka gam akporo Wear na Wear OS | Gam akporosis
Ngwa kachasị mma maka gam akporo Wear na Wear OS
Edere Ferreno | | Ngwa gam akporo, smartwatch
Ọtụtụ ndị ọrụ na-akụ nzọ ịzụta smartwatch taa. Modelsdị ndị a nwere gam akporo Wear dị ka sistemụ arụmọrụ, weghachite ugbu a wear OS.. Ha aghọwo otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ewu ewu na ahịa, ha na-enyekwa anyị ọtụtụ nhọrọ. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịnweta ọtụtụ n'ime ha site na iji ngwa.
Enwere ọtụtụ ngwa dị mma maka elekere anyị na Wear gam akporo. Yabụ, n'okpuru anyị ga-ahapụ gị nhọrọ na ụfọdụ n'ime ngwa ndị a. Yabụ, ịnwere ike ịnye elekere gị oge niile. Njikere ịmụta banyere ngwa ndị a?
O doro anya Ha nwere ike ịbụ ezigbo enyemaka maka ndị ọrụ nwere elele gam akporo Wear ma ọ bụ Wear OS dị ka sistemụ arụmọrụ. Ma ọ bụ bụrụ ihe ngosi nke ihe niile ị nwere ike ime na otu maka ndị ọrụ ahụ na-eche ịzụrụ otu.
1 Weta! Ndepụta ụlọ ahịa
2 Podcast Republic - Podcast & Ngwa Akwụkwọ
3 Onye na-agba ọsọ
4 Ibu os
Weta! Ndepụta ụlọ ahịa
Ngwa bara uru nke ukwuu na-enye anyị ohere ịme ndepụta ndepụta ụlọ ahịa anyị n'ụzọ dị mfe ma hazie nke ọma. Ka anyị ghara ichefu ihe ọ bụla ọzọ mgbe ọzọ anyị gara ụlọ ahịa ịzụta ihe. Ọ nwere nnukwu interface, nke dabara na elekere nke ọma. Ya mere, anyị nwere ike ịhazi ihe niile dịka edemede ma ọ bụ mkpa. Ya mere, anyị doro anya banyere ihe anyị ga-azụta ngwa ngwa n'oge ọzọ.
Nbudata ngwa a bụ n'efu. Na mgbakwunye, anyị enweghị ịzụta ma ọ bụ mgbasa ozi n'ime ya.
Developer: Weta! Slọ nyocha AG
Podcast Republic - Podcast & Ngwa Akwụkwọ
Nke abuo, anyi choputara otu ihe kacha mma anyi nwere n’uwa pọdkastị. Na mgbakwunye ịbụ otu n'ime ole na ole anyị nwere maka gam akporo Wear. Yabụ n'ụzọ ahụ, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọtụtụ pọdkastị dị iche iche na elekere anyị mgbe ọ bụla anyị chọrọ. Na mgbakwunye, anyị nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ zuru oke. Akpaghị aka na nbudata, nkwado asụsụ, mmekọrịta, anyị nwere ike ịmepụta ụdị listi ọkpụkpọ niile… Na mpempe, a zuru ezu nhọrọ. Ke adianade do, ọ nwere nnọọ ọrụ na onye-enyi na enyi imewe.
Nbudata ngwa a maka gam akporo Wear bụ n'efu. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ mgbasa ozi na ịzụrụ n'ime. Ga-akwụ ụgwọ ka ịnweta ụfọdụ pọdkastị.
Podcast Republic - ngwa pọdkastị
Elekere Smart bụ nhọrọ a ma ama maka ịpụ gaa ịme egwuregwu. Ha bụ ezigbo onye mgbakwunye n'ihi na ha nwere ọtụtụ ọrụ maka ya. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịkwalite nke a karịa iji ngwa ụfọdụ dị ka nke a. Ngwa a ga - edobe mmega ahụ anyị oge niile. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere setịpụ ihe mgbaru ọsọ o nwekwara nkwado maka ndị ọrụ na-eji igwe kwụ otu ebe pụọ. Yabụ na ọ zuru oke na nke a. Ọ nwekwara ezigbo nhazi, nke na-eme ka ọ bụrụ elekere na Wear gam akporo zuru oke.
Nbudata ngwa a bụ n'efu. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ịzụrụ na mgbasa ozi n'ime ya.
Onye na-agba ọsọ - GPS na-agba ọsọ ije
Gam akporo Wear ga-eji nwayọọ nwayọọ nyefee Wear OS, usoro sụgharịrị ọhụrụ maka elele anya. Anyị nwere ngwa ahụ n'onwe ya. Ọ bụ ngwa ga-adị mkpa maka ndị ọrụ. Ebe obu na otu aka anyi choro ya mmekọrịta na ekwentị. Na mgbakwunye, ekele maka ngwa anyị ga-enwe ike ijikwa ọrụ ndị ọzọ dị ka Google Assistant ma ọ bụ Google Fit. Ya mere, ọ dị oke mkpa mgbe ụdị ọhụụ a sistemụ arụmọrụ na-erute elekwu anya na ahịa.
Dị ka ọ dị na mbụ na ngwa Google, anyị nwere ike chọta ya maka n'efu na enweghị ụdị ịzụta n'ime n’ime Storelọ Ahịa Play.
Ọ bụ otu n'ime ngwa ole na ole nke oge ahụ nwere nkwado maka gam akporo Wear 2.0. Yabụ ọ bụ nhọrọ dị mma ịtụle yana na anyị nwere ike ịwụnye na nche. Ọ bụ ngwa a maara nke ọma, nke a pụrụ ịdabere na ya nke na-enye anyị ọtụtụ ozi gbasara ihu igwe oge niile. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụ chọọ itinye ngwa ihu igwe, ọ bụ nhọrọ kacha mma.
Ngwa dị maka n'efu. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ịzụrụ na mgbasa ozi n'ime.
AccuWeather: ihu igwe kwa ụbọchị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kachasị mma maka gam akporo Wear na Wear OS
Egwuregwu 3D kacha mma maka gam akporo
The mobile ugwo ngwa dị na Spain